Ihe ọhụrụ Samsung SmartCam nwere ike nyochaa ụlọ anyị na 1080p ka edozichara | Akụkọ akụrụngwa
Samsung bụ ụlọ ọrụ nwere ike iju anyị anya na ụdị ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụghị naanị ngwaọrụ mkpanaaka. Ihe akaebe nke a bụ ihihi mere n’oge gara aga site na ebe nrụọrụ weebụ Best Buy, ebe a igwefoto nche ohuru, emere aha SmartCam baptism.
N'oge ahụ ederede pụtara akpọpụtara dị ka "Na-ere n'oge na-adịghị anya"Agbanyeghi na ugbu a ụlọ ọrụ South Korea egosighi ngwaọrụ ọhụrụ a. Ihe oyiyi nke oke àgwà dị ala nke anyị nwere ike ịhụ na ibe weebụ dị egwu, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhụ njirimara na nkọwa ha kpamkpam.
N'etiti ndị ọzọ, ọhụụ abalị nke infrared nke na-enye ohere ịdekọ n'etiti abalị n 'ebe dị anya. O nwekwara ihe mmetụta CMOS nke na-enye anyị mkpebi 1080p, yana mbugharị 10x, oke dịgasị oke na ohere nke ịdekọ ọdịyo site na igwe okwu agbakwunyere.
Ọzọ nke nnukwu uru Samsung SmartCam ọhụrụ a sitere na Samsung, nke a ga-ewepụta ma bupụta n'ahịa na ụbọchị ndị na - abịanụ, bụ na na-enye ohere ịdekọ naanị mgbe achọpụtara mmegharị, na-echekwa oge na awa nke vidiyo na-enweghị isi.
Obi abụọ adịghị ya na SmartCam a bụ ngwaọrụ na-adọrọ mmasị, ọkachasị maka ndị niile na-achọ ijikwa ihe niile. N'oge anyị na-amaghị ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ banyere nke a ọzọ Samsung igba egbe, ma dị ka anyị ga-esi mara ha, enwela obi abụọ na anyị ga-anọgide na-agwa gị banyere ha.
Kedu ihe ị chere banyere Samsung SmartCam ọhụrụ ahụ nke a ga-ewepụta n'ihu ọha na ụbọchị ndị na-abịanụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ihe ọhụrụ Samsung SmartCam nwere ike nyochaa ụlọ anyị na 1080p ka edozichara
Nwelite WhatsApp na-esote ga-enye anyị nkeji 5 iji hichapụ ozi